छोरा बिदेश बुहारी मधेस, बृद्वा आमा बृद्घाश्रम: छोरासँग भेट त परै जाओस्, फोन नभाकै ६-७ बर्ष भयो (कारुणिक कथा) – Gulminews
Home/भिडियो/छोरा बिदेश बुहारी मधेस, बृद्वा आमा बृद्घाश्रम: छोरासँग भेट त परै जाओस्, फोन नभाकै ६-७ बर्ष भयो (कारुणिक कथा)
छोरा बिदेश बुहारी मधेस, बृद्वा आमा बृद्घाश्रम: छोरासँग भेट त परै जाओस्, फोन नभाकै ६-७ बर्ष भयो (कारुणिक कथा)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ भाद्र २५, बुधबार २३:३४ मा प्रकाशित
अप्डेट (२७ साउन बेलुका ७ बजे) : ति बृद्वा आमासँग गरेको कुराकानी रबिलाल पौडेलले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट हटाएका छन् । ति आमाकी नातिनी सहित परिवारका अन्य सदस्यले ति आमाले बोलेका कुरा झुटा हुन्, त्यो आरोप मात्र भयो भने पछी आफुले भिडियो हटाएको रबिलाल पौडेलले बताएका छन् । तर के ति आमाले संच्चिकै झुटो बोलेकी हुन ? यदी झुटो बोलेकी हुन् भने किन झुटो बोलिन् ? वास्तविकता के हो? यस बिषयमा आफुले छिट्टै फलोअप रिपोर्ट तयार पार्ने पौडेलले बताएका छन् ।
यो हेर्नुस् अर्को भिडियो ।
८४ गर्ने उमेरकी एउटी आमा । दमको रोग छ । श्रीमान् उहिल्यै बितेर गए, ४० बर्ष बढी भईसकेछ । छोरा बुहारी नभएका हैनन्, छोरीहरु पनि नभएका हैनन् तै पनि ८२ बर्षको उमेरमा ति आमा बृद्घाश्रमको चिसो भुँईमा आफ्ना जीवनका उत्तरार्धका समय बिताउँदैछिन् ।
छोरीहरु त बिहे गरेर घर गरी खान लागे, भएको एक्लो छोरा र बुहारी बुढेसकालको साहरा बन्लान भन्ने ठुलो आशा थियो ति आमालाई । तर भईदियो ठीक उल्टो यो उमेरमा छोरा बुहारीले हेरचाह गर्ने कुरो त परै जाओस घरमा बस्न पनि दिएनन् । आफुले जन्म दिएको छोरासँग भेट त परै जाओस् फोनमा नबोलेको पनि ६-७ बर्ष भईसक्यो । कठै ! ति आमाको कारुणिक जीवन कथा । गुल्मी जिल्ला सत्यवती गाउँपालिका जोहाङ घर भई हाल रुद्राबेणी स्थित बृद्घाश्रममा बसिरहेकी एक आमाको जीवन कथा सुन्दा नरुने को होला ?
आमा अब घर गएर छोरा बुहारीसँग बस्न मन छैन भन्ने प्रश्नमा बरु कालिगण्डकीमा हाम फालेर मर्छु छोराबुहारीसँग फर्केर जान्न भनेको सुन्दा झन् भावुक बनाउँछ । नाति-नातिना, पनाति-पनातिना खेलाउँदै छोराबुहारीसँग रमाउनुपर्ने आमा बृद्घाश्रममा बसेर काल पर्खिरहेको खबर सुन्दा सबैको मन निचोरिएर आउँछ ।